वि’रामी भएर अस्पताल धा’उनुपरेपछि जापानी प्रधानमन्त्रीद्वारा प’दबाट रा’जीनामा – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /International/वि’रामी भएर अस्पताल धा’उनुपरेपछि जापानी प्रधानमन्त्रीद्वारा प’दबाट रा’जीनामा
वि’रामी भएर अस्पताल धा’उनुपरेपछि जापानी प्रधानमन्त्रीद्वारा प’दबाट रा’जीनामाकाठमाडौं : जापानमा सबैभन्दा लामो समयसम्म कार्यकारी प’द स’म्हालेका सिन्जो आवेले प’दबाट रा’जीनामा दिएका छन्। केही समयदेखि ख’राब स्वास्थ्य र बि’रामीका कारण उनले शुक्रबार प’दबाट रा’जीनामा दिएका हुन्। यसअघि जापानको राष्ट्रिय प्रसारक एनएचके च्यानलले शुक्रवार बिहानै आबे रा’जीनामा पूरा तयार रहेको जनाएको थियो। उक्त रिपोर्टमा सिन्जो आबे आफ्नो बि’ग्रँदो स्वास्थ्य स्थितिका कारण सरकारलाई स’मस्याबाट ब’चाउन यो निर्णयमा पुगेको उल्लेख थियो। हालै मात्रै एक अस्पतालमा दुई पटकसम्म पुगेपछि उनको स्वास्थ्यमा केही न केही समस्या भएको अ’ड्कल का’टिएको थियो।
अस्पताल धाउन थालेसँगै उनको प्रधानमन्त्री पदबारे अनेक प्रश्‍न उठ्न थालेका थिए। उनले अस्पाल जानुपरेको कारण बताएका थिएनन्। एक पटक त उनी आठ घण्टासम्म अस्पतालमै बसेका थिए। उनको सत्ताधारी लि’बरल डे’मोक्रेटिक पार्टी (ए’लडीपी) का अधिकारीहरुले रा’जीनामाको अ’ड्कल खारेज गरिदिएका थिए। मंगलवार मात्रै उनका एक सहयोगीले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै आबे पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री नै रहने बताएका थिए। एलडीपीका ट्या’क्स प्या’नल प्रमुख अकिरा अमारीले यस कुराको ख’ण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आ’मचुनाव गर्न चाँडै तल्लो स’दन भं’ग गर्ने बताएका थिए।
उनी आफ्नो पुरानै रोग अल्सरेटिभ कोलाइटिससँग जु’धिरहेका छन्। सिन्जो आबेले आफ्नो रा’जीनामा र बि’रामीबारेमा शुक्रबारै पत्रकार स’म्मेलन गरेर बताउने भएका छन्। उनले त्यहीँ देशबासीलाई पनि स’म्बोधन गर्ने भएका छन्। जापानको सत्तारूढ पार्टीका अधिकारीले भने सिन्जो आबेको स्वास्थ्य ठीक रहेको बताएका थिए। तर अस्पताल लगातार धा’इरहेपछि उनी सेप्टेम्बर २०२१ सम्म प’दमै रहिरहनेमा अड्कलबाजी सुरु भएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीसँग जु’ध्‍न नसकेको भन्दै आबेको आ’लोचना भइरहेको थियो। यसका अलावा उनको पार्टीका सदस्यमाथि लागेको स्क्’यान्डलको आरोपका कारण पनि उनी घे’राबन्दीमा थिए।
कोरोना भाइरसको म’हामारीका कारण जापानको अर्थव्यवस्थाको हालत ऐतिहासिक रूपमा तल्लो स्तरमा पुगेको छ। तर आबेले अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउने बा’चा गरेका थिए। जापानको का’नुन अुनसार आबे आफ्नो भूमिका नि’र्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा एक अस्थायी प्रधानमन्त्री नि’युक्त गर्न सक्नेछन्। जसलाई प’दमा रहिरहने निश्‍चित सीमा तो’किएको छैन। आबेपछि जापानमा वित्त मन्त्रीसमेत रहेका उप-प्रधानमन्त्री ता’रो आसो प्रधानमन्त्रीका पहिलो दा’बेदार हुन्। उनीपछि प्रमुख क्या’बिनेट से’केटरी यो’शिहिदे सुगा पनि प्रधानमन्त्रीका दा’बेदार हुन्।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आ’कस्मिक चु’नावको घो’षणा गर्न सक्दैनन्। तर जबसम्म नयाँ पार्टी नेता र प्रधानमन्त्रीको चु’नाव हुँदैन तबसम्म सन्धि र बजेट जस्ता मा’मिलामा नेतृत्व गरिरहन सक्छन्। उनले यस क्रममा आफ्ना महान काका आ’इसाकु सातोद्वारा आधा शताब्दी पहिले तय गरेको सबैभन्दा लामो कार्यकालको रेकर्डमा पनि बराबरी गरेका छन्। यसअघि सन् २००७ मा सिन्जो आबेले प्रधानमन्त्री प’दबाट अ’चानक रा’जीनमा दिएका थिए। मनत्रिमण्डलमा घो’टालाको आ’रोप लगेपछि एकपछि भएको निर्वाचनमा उनको पार्टीले ठूलो क्ष’ति व्यहोरेको थियो।
त्यसपछि उनको स्वास्थ्य बि’ग्रिएको थियो। आबे त्यही बेलादेखि आफ्नो उपचारमा जु’टिरहेका छन्। अब के ? आबेले रा’जीनामा दिएपछि उनको ए’लडीपीमा म’तदान हुनेछ। जसले अध्यक्षका रुपमा आबेको स्थान लिने व्यक्ति तय गर्नेछ। यस चु’नावपछि एक संसदीय मतदान हुनेछ। जसबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छा’निनेछ। मतदानमा विजयी हुने व्यक्ति आबेको कार्यकालको अन्तिम सन् २०२१ सेप्टेम्बरसम्म प’दमा रहन पाउनेछ।
भारतबाट सिंगापुर जान लागेको पानीजहाजमा भीषण आगलागी, चालक दलका २५ जना थिए
सुनखानीमा फसेका १० कामदार मृत भेटिए
मनोरंजन यी पाँच स्टार किड्सलाई बलिउड प्रति छैन कुनै मतलब, गर्नु छैन बलिउडमा काम !
बहराइनका राजकुमार प’र्वतारोहणका लागि नेपाल आउँदै